မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): January 2012
အိပ်မက်ဟာ မင်းအတွက် ကဗျာ...
အရှုံးခန်းမှာ တသက်လုံးနွမ်းတော့မယ် မထင်.......။ ။
Author Anonymous at 3:56:00 PM 8 မှတ်ချက်
ပြည့်ပြီးကျွန်တော့်ကို မောင်းထုတ်လိုက်ချိန်အထိ။ ။
Author Anonymous at 11:25:00 PM6မှတ်ချက်
နေကိုစားသောတိမ်(သို့ )ချစ်ခြင်းရဲ မှတ်တမ်း (ခံစားတတ်သူသာဖတ်ရန်)
လှုပ်ခတ်ဆဲရင်ခုန်သံတွေ ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်နေတာ
မေ့အပေါ်အထိမနာစေဖို့သိသာစေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုး
မမျှော်လင့်ပဲတွေးခဲ့တာမဟုတ်လို့မျှော်လင့်ရင်းဝေးရက်တွေကို
မေ့အတွက်ဒီတစ်သက် ချည်နှောင်မဲ့မေတ္တာမျိုးကို ဒီရင်ကလှစ်ဟမပြနိုင်တော့ပေမယ့်
ရင်ခုန်ခြင်းအစ ရင်ခုန်ခြင်းအလယ် ရင်ခုန်ခြင်းအဆုံးတိုင်း
တဒင်္ဂမဟုတ်ခဲ့လို့ပြင်မရတဲ့အဆုံးသတ်တွေ
ပေးဆပ်ခြင်းစကားလုံးမှာ ထိုက်တန်လောက်တဲ့ အရည်ချင်းတွေမရှိခဲ့လို့ 
နောင်အခါပတ်သက်မှုမှာ သက်တန့် တစ်ခုပမာ အရောင်အသွေးစုံပါရစေ...
မိုးမြင့်စံပန်း ပွင့်လန်းဖို့ ရာ မြေပြင်ရင်းမှာမထိုက်ပါ မေ...
ဖယောင်းသမ်းဖဝါးနုနု ခရောင်းလမ်းကိုမတုပါနဲ့မေ...
ပိန်းပေါ်ကျ နှင်းစက်ဘဝရဲ့ ဒဏ္ဍာရီတွေ ဖန်လာပြီးသည်မို့ 
ရင့်နစ်ပန်းအတွက် လန်းရက်မှာ တို့ နှစ်ဦးအခန်းဆက်လည်း
လွမ်းရက်ဆိုတာလောက်ပဲ ခပ်ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ့ စွဲတွေ
ပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်ရင် လုံလောက်မှာပါမေ......... ။ ။
Author Anonymous at 1:31:00 PM7မှတ်ချက်
သူ့နည်း သူ့ဟန် သူ့အားမာန်နဲ့
ဆရာသမားကြီးလည်း ကျန်းမာပါစေ။ ။
Author Anonymous at 7:35:00 PM2မှတ်ချက်
တစ်ရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ် နဲ့ ဒုတိယလူ (ဖြစ်ရပ်မှန် ခံစားချက်စစ်စစ်)
ကိုဒုတိယဆီမှ ကြိုက်လွန်းသော ကဗျာတစ်ပုဒ်အား ခွင့်တောင်း၍ တင်းထားခြင်ဖြစ်ပါသည်
တစ်ရွာ..နှစ်ရွာ..တစ်မြို့ ..နှစ်မြို့ ..ရောက်ခဲ့..ရာ.
ရေကြည်သောက် မြက်နုစားချင် တဲ့စိတ်ကြောင့်..အခုတော့
သောက်ရေအိုးစဉ်တွေ ရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ လူဖြစ်ရတာ..
ငါ့ကိုငါ ဂုဏ်ယုတယ်ကွ..လို့ ပြောခဲ့တဲ့.
တစ်ခါ တစ်ခါ ငါ့ ကိုငါ မသတီ..သလိုလို..
ရောင်စုံလူတွေကြားထဲ့တိုးဝှေ့ ..တွေ့ သမျှလူ..ဟန်လုပ်ပြုံးပြ..
တစ်ခါ တစ်ခါ ငါ ပါးတွေများတောင် ညောင်းလို့ 
ဘယ်ဆီရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ အိမ်ပြန်ချိန်တွေ တမ်းတနေမိတယ်
.ကိုယ့်ဒုးကိုချွန် ကိုယ့်အရိပ် ကိုနင်း..
Author Anonymous at 1:38:00 PM2မှတ်ချက်
ခဏတာ အိပ်မက်ထဲ ဆုံတွေ့တာမှာ
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကျောခိုင်းရင်း
လွတ်လပ်စွာ ကြည်နူးချင်းတွေ မရှိဘူး.............။
မနိုးထချင်ပဲ နိုးထခဲ့ရတဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခု
မသန့်စင်ချင်ပဲ သန့်စင်ခဲ့ရတဲ့ မျက်နှာ
မစားသုံးချင်ပဲ စားသုံးခဲ့ရတဲ့ နံနက်စာ
အချစ်ဆိုတာ စီးကရက် တစ်လိပ်သာဆိုရင်
တရှိုက်မက်မက် နှစ်သက်နေရမှာ ကြောက်တယ်............။
လက်နဲ့ တို့လိုက်မှ ထွက်ကျလာတဲ့ စကားသံ
နေဝင်ချိန်ကို မျှော်လင့်တဲ့ လမင်း
လိပ်ပြာကိုမှ မျှော်လင့်တဲ့ ပန်းကလေး
တေးခတ်လက်ကို မျှော်လင့်မိတဲ့ သံစဉ်တစ်ခု
ဖြူစင်မှုကို မျှော်လင့်နေတဲ့ ငါ
အရာရာ အိပ်မက်တွေပဲ ဆိုတာ
Author Anonymous at 8:46:00 AM 1 မှတ်ချက်
ဒီ မြစ်ကမ်းရဲ့ အပေါ်
မြန်အောင်မြို့ မှာ ပူဆော်ထားတယ်...........။
ခေတ်မှီ ကစားကွင်း မရှိပေမယ့်
လေထန်မှ လျှင်မြန်စွာ ပျံတတ်တဲ့
လေတံခွန် လေးတွေကို ကြည့်ငေးရင်း
မြက်ခင်းပေါ် မှာ ကျောခင်း
ကြည့်ခဲ့ ဘူတဲ့ ညခင်းတွေ.............။
အိမ်ပြန် တက်တဲ့ သားကို
စိုးရိမ်မှု တွေနဲ့ ထိုင်စောင့်ရင်း
အိပ်ပျက်ခြင်း ရှိခဲ့တဲ့ အမေ...............။
ရသ စာအုပ်တွေထဲမှာ ထောက်ပြရင်း
ညင်သာစွာ ဆုံးမခြင်း ရှိတဲ့ အဖေ...............။
ငါမချစ်လို့ ပစ်ခဲ့တာ မဟုတ်..............။
ဘဝရဲ့ သင်ခန်းစာကို သင်ကြားရင်း
မြန်မာပြည်ဆိုတာ ကမ္ဗည်း ထိုးတားတယ်................။
Author Anonymous at 5:01:00 PM4မှတ်ချက်
မိုးမခမြစ်ကို အတိုးချချစ်ဖို့ ငါလာပြီ
မိုးမခတော့ မဟုတ်ဝူးနော် (မလေးရှား)ကလန်းမှာ ညနေသွားလည်ရင်ရိုက်လာတာ
အတိုးချချစ်ချင်လို့ လာခဲ့ပြီ။ ။
Author Anonymous at 3:14:00 PM 1 မှတ်ချက်
ပိုးထိုးပြီးသား တဝက်တပျက်ရက်စွဲတစ်ချို့ 
မာန်ပါပါ ဟစ်ကြွေးရင်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
ဂုဏ်ပကာသနာတွေရဲ့ဆီဦးထောပတ်တွေကြား
ငါ့ နေ့ ရက် တချို့ တချို့ ခေါင်းစဉ်တွေ
အတက်အဆင်းများနဲ့ လူရှုပ်ရှုပ် ဘတ်(စ်)ကားမှတ်တိုင်...
သတ္တုလိုမာကြောလွန်းနေ့ ရက်တွေ စားသုံးရင်းက
မင်းလို့ ဆိုရမှာထက် တခါခါ ငါတွက်ရင်းအဖြေပျောက်
Author Anonymous at 1:23:00 PM3မှတ်ချက်
ငါ့လက်ရေးလှလှလေးသို့..(သို့မဟုတ်) အပျော်ရေးတဲ့ ကဗျာ
Author Anonymous at 12:22:00 AM2မှတ်ချက်
သ စ္စာေ ဖာက် စံ ပ ယ်-၂
စံပယ်ပွင့်သံတွေ ဆူညံခဲ့ပြန်ပြီ။ ။
Author Anonymous at 11:25:00 AM 1 မှတ်ချက်
စတည်းခဲ့ တဲ့ သက္ကရာဇ်တွေ ကြား
ကမ္ဘာ ကြီးတောင် အံ့သြစေတယ်...........။
အတောင်ပံ များကို ဖြန့်ခတ်ရင်း
တဖန် ပျံသန်းခြင်း ရှိလာပြီ
အနာဂတ် အတွက် ကောင်းကင်ဆီမှာ
ငါတို့အတွက် ရောင်နီသန်းလာတာ မြင်ရတယ်......................။
Author Anonymous at 4:02:00 PM4မှတ်ချက်
တာထွက်နှေးတဲ့ခြေထောက်တစ်စုံလား
ပန်းဝင်ချိန်စောဖို့မရေရာတော့...
လူမှန်တော့ အချစ်ကိုကြံ အပူဒဏ်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ်တိုး
ခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ အသည်း ခံစားရင်းကွဲပါစေတော့...
မလာနဲ့ ပြောပြီး မနှင်ပဲထားတယ်
တစ်ခါတစ်ခါ ကန့် တန့် လိုက် အရွဲ့ တိုက်ချင်လာတော့
ဒီလိုနဲ့ မိုးလင်း ငါ့မနက်ခင်း
ငါဘယ်လို အင်အားတွေနဲ့ ပြောရမှာလဲ...။ ။
Author Anonymous at 3:21:00 AM7မှတ်ချက်
ယခုလထုတ် ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်း တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် အောင်မှုးဝေ၏ ကဗျာ
ဒီကဗျာလေးက ဆိုဒ်မှာတင်ခဲ့ပြီးသားပါ ယခုလပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းမှာ အရွေးခံရတာ
ကြောင့် ကိုအောင်မှုးဝေအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ထပ်မံ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ၏...။
Author Anonymous at 2:28:00 PM2မှတ်ချက်
လုံး ထွေး တွန့် ကြေ စွာ အိပ် စက် ပြီး တဲ့ နောက်
Author Anonymous at 11:10:00 PM4မှတ်ချက်
ပြန်ခဲ့ပါ မေ...( လေလွင်လူ၏ ဖြစ်ရပ်မှန် )
ဝေဆာဆဲ အပြုံးရက်တွေ ဘာကြောင့်ဆိတ်သုန်းတတ်တာလဲ
မျှော်လင့်ချက်တစ်ပွေ့ တစ်ပိုက် ဂရက်ရိုက်နေတဲ့
ဒီလူ့ ရင် နွမ်းနယ်ပြီး ရနံ့ ပြယ်ရတော့မှာလား
တွေ့ ဆုံခြင်းအတက် ဆုံကွဲခြင်းအဆင်း
လောကဓံရဲ့ဒီအခင်းတွေ
နှင်ရက်အားတဲ့စကား စည်းဘာလို့ ခြားခဲ့တာလဲ
မလိုချင်ပစ် လိုရင်ချစ် ဒီလိုလား “အချစ်က”..
ညှင်သာတဲ့ အကြင်က ရင်နာချက်ထင်လာအောင်
တို့ နှစ်ဦးကြားတမ်းတ ရက်တွေရှိပါတယ်
တူညီပြီးသား ချစ်ခြင်းမေတ္တာ စွန့် ခွာကျောခိုင်းထားမှာလား
သတိရစိတ် ဖဲ့ခြွေချိန် မေ့မျက်ဝန်းတွေ စိုနေမှာ
Author Anonymous at 3:54:00 PM 8 မှတ်ချက်
Virus ကူးစက်မှုရန်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Auto Run Eater
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ Recycler Virus ထိတော့မှအသုံးပြုဖြစ်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးတစ်ခု
ဖြစ်ပါတယ် အသုံးဝင်ပုံကတော့ Auto run Virus ကိုတားပေးနိုင်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်
ချိန် ပြင်ဆင်ချိန် ရနိုင်ပါတယ် Recycler Virus ထိပြီဆိုရင် Memory Stick ထဲက ဖိုင်
တွေအားလုံး Shortcut ပုံလေးတွေ ပြောင်းသွားပြီး ဖွင့်မရတတ်ပါ။ နောက်မှ သီးသန့် 
ရေးပါအံ့ ။ အကယ်၍ ဒီဆော့ ၀ဲသာ စောစောထဲ့ထားရင် Auto run ဖိုင်က ချက်ချင်း
အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက် ကူးစက်မှုကို Anti virus ကရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ် ဒီတော့ ကြို
တင်ကာကွယ်မှုအနေနဲ့Auto run eater ကို မိမိတို့ ၏ ကွန်ပျုတာထဲမှာ ထည့်ထား
ရင် Memory Stick နဲ့Portable Drive တွေကနေ Virus ကူးစက်မှုကို အတိုင်းတာ
တစ်ခုအထိ တားဆီးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ကျနော်၏ ထင်မြင်ယူဆချက်မှာ ကွန်ပျုတာ
တစ်ခုတွင် Anti Virus ဆော့ဝဲတစ်ခုနှင့်Auto Run Eater ရယ် USB Disk Security
ရယ် ထည့်ထားရင် သာမန်အနေနဲ့လုံခြုံပါပြီ ။ (လေ့လာမှု သက်တမ်းအရ ကောက်ချ
ချမှုတစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပါကြောင်း ၀န်ခံအပ်ပါသည်) ။
ဒီမှာ Download ယူပါ - Auto Run Eater
မူရင်းမှာ လေ့လာကြည့်ပါ - http://www.softpedia.com/get/Security/Secure
Author Anonymous at 1:01:00 PM4မှတ်ချက်
Author Anonymous at 11:12:00 AM5မှတ်ချက်
မမြင်လည်းလွမ်း မြင်လည်းလွမ်းမို့ 
Author Anonymous at 2:00:00 AM5မှတ်ချက်
Author Anonymous at 6:18:00 PM 18 မှတ်ချက်
ကျွန်တော် နားမလည် ခြင်းများ........(တစ်ချိန်က ကျနော့်မမသို့ )
သံယောဇဉ် တစ်ခုရဲ့ မြစ်ဖျား
နင်ပေးခဲ့တဲ့ နှလုံးသားက ဒဏ်ရာ
ငါရသင့်တဲ့ သင်ခန်းစာ ဆိုရင်
ခဏခဏ(နင့်ကို) သတိရခြင်းတွေ ရှိတယ်......
ကမ်းထားတဲ့ လက်က တွန့်ဆုတ်ချင်တယ်.......
အနာဂတ်အတွက် ပန်းတိုင်ဆိုတာ ပါတယ်...............
သတ္တိရှိကြ တာတဲ့လား ချစ်သူရယ်................။
Author Anonymous at 8:18:00 PM6မှတ်ချက်
ခပ်နွေးနွေးပဲ တို့ တွေဝေးခဲ့ ကြတယ်
အခုတော“့ ငါ”ဖြစ်နေတယ် ကောင်မလေး...
၂၃ တိမ်းစောင်းခြင်းမှာ တို့ တွေအတွက်
လမ်းခွဲမှာ လွမ်းရဲတော့ ဝမ်းမနည်းပါဘူး
တစ်ခါတစ်ခါမေ့နိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုမှာ
မကြာမကြာ သတိရခြင်းတွေနဲ့ ရောနှောနေမိတယ်
လမ်းဆုံးတောင် အလွမ်းဆုံးက “ငါ”ဖြစ်နေတယ် ကောင်မလေး...
မင်းဆီက ဘယ်တော့မှ မကျန်ရှိနိုင်သံယောဇဉ်တွေ....
ငါ့ဆီမှာ ဘယ်တော့များ ပျောက်ကွယ်နိုင်မယ့်ချစ်ခြင်းတွေ...
ဆုံမှတ်မှားတဲ့ ဆုံချက်များရဲ့ခြေရာတွေလား....
“အချစ်”လို့ခေါ်ရမလား...
အခုချိန်ထိ မရေးရာအတွေးတွေနဲ့ 
အသေချာဆွေးနေတာ “ငါ”ပါပဲ ကောင်မလေးရေ....
Author Anonymous at 6:12:00 PM2မှတ်ချက်
နားထဲမှာ ကြားလို့တော့ ကောင်းပါရဲ့..................။
မင်း ဘဏ္ဍာကို မထိရဲလို့
ပေးဆပ်ခြင်းဟာ အချစ်လို့ ဆိုခဲ့ရင်........
သူ ဘုရင် ဖြစ်ခွင့် ကြုံတော့
ပေးဆပ်ခြင်း စကားနဲ့ ချစ်ကြတာ
ပိုင်ဆိုင်ခွင့် နဲ့ ကြုံခဲ့ရင်
ချစ်သူကို လူတိုင်းက ရယူချင်တယ်..............။
(၁၅၀၀ ) မှာ မဟုတ်
( ၅၂၈ ) မှာတော့ ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်..................။
(လူသားတွေအတွက် ပေးဆပ်ခြင်းဖြင့် ချစ်ခဲ့သော ဘုရား........
သား..သ္မီးတွေအတွက် ပေးဆပ်ခြင်းဖြင့် ချစ်ကြသော မိဘ.......
မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ပေးဆပ်ခြင်းဖြင့် ချစ်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း......)
မှတ်ချက်။ ။ကျွန်တော်အတွေးတွေ မှားချင်မှားနေမည်။
Author Anonymous at 12:15:00 PM6မှတ်ချက်
Author Anonymous at 11:19:00 PM3မှတ်ချက်
“မင်္ဂလာပါ ၂၀၁၂ ရေ.....”
“happy new year” အော်နေကြ လူတစ်စု....
ဘာကိုထုလို့ဘာတွေဆစ်
ဘဝတွေထမ်းပိုး နေ့ ညခန်းမခွဲနိုင်သူမို့ 
အော်လိုက်မိပါရဲ့ အလုပ်ထဲ“မင်္ဂလာပါ ၂၀၁၂ ရေ...”
ချစ်သူက ထားသွား အဆွေးကဆင့်
ဒီဇင်ဘာနဲ့ နှစ်ဟောင်း အမြန်ပြောင်းဖို့ ....
ဒီနှစ်သစ်ရဲ့ ဒီနေ့ ရက်မြတ်မှအစပြုလို့ 
စိတ်ရင်းတစ်ခု အခြေပြုလို့ 
“မင်္ဂလာအပေါင်းခကာညောင်းတဲ့ ၂၀၁၂ ရေ.....”
Author Anonymous at 10:02:00 AM7မှတ်ချက်
ဒီနည်းလေးက ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ထဲမှာပါတယ် ။ သူများအကောင့်ကို မသိအောင် ၀င်ကြည့်တော့မယ်ဆို အရေးပါတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဟိုးအရင်က ဒ...